We Fight We Win. -- " More than Media ": “နယူးယောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၏ သဘောထား ကြေညာချက်”
စစ်ကုိုင်းတိုင်း၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ လက်ပံတောင်းတောင်ရှိ စစ်တပ်ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့် တရုတ်စစ်လက်နက်ထုတ်ကုမ္မဏီတို့၏ ဖက်စပ် ကြေးနီစီမံကိန်းကို ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ရဟန်းသံဃာများ၊ ကျောင်းသား လူငယ်များက ငြိမ်းချမ်းစွာ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေသည့် သပိတ်စခန်းများကို နိုဝင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ နံနက်တွင် ကြံ့ဖွှံ့အစုိုးရ၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များက အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်တိုက်သွင်းပြီး ဖြိုခွဲဖျက်စီးခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော အစုိုးရ၏ အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ရဟန်းသံဃာနှင့် ပြည်သူ ၁၀၀ နီးပါး မီးလောင်ဒဏ်ရာများ ရရှိခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုသုို့ မြန်မာအစုိုးရနှင့်၎င်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ၏လုပ်ရပ်ကို နယူးယောက်မြန်မာ.ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှမြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူများကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချလိုက်သည်။
မြန်မာပြည်၏ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးနေသည့် အချိန်အခါ အခြေအနေတွင် အာဏာရအစုိုးရ၊ ၀န်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း အာဏာပိုင်များနှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္မဏီများ၊ ပြည်ပအစုိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖက်စပ် စီမံကိန်းများ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ကြရာတွင် ဒေသခံများနဲ. မြန်မာပြည်သူအားလုံး၏ ရေတို ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကို ဦးစားပေးရေး၊သဘာဝ ပတ်ဝန်ကျင် ထိမ်းသိမ်းကာကွယ်စောက်ရှောက်ရေး တရားမျှတရေး၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေးသည် အရေးကြီးဆုံးသော အဓိကအချက် ဖြစ်သည်။ ထိုအားနည်းချက်နောက်ခံများကြောင့် ပြည်သူတို့၏ ဆန့်ကျင်မှုများ၊ ကန့်ကွက်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရပါကလည်း ငြိမ်းချမ်းစွာ တရားနည်းလမ်းကျစွာ အဖြေရှာရမည်။ ယခုကဲ့သို့ လူတစု၊ ကုမ္မဏီ၊ အစုအဖွဲ့အစည်းတခုကို ကာကွယ်ပြီး အများပြည်သူကို ထိခိုက်နစ်နာအောင် အကြမ်းဖက် ဖြေရှင်းခြင်း လုံးဝ မပြုလုပ်သင့်ပေ။
(၅)အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှု ကြောင.် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ့ရသော ရဟန်းသံဃာများအား အတိအလင်း ဝန်ချတောင်းပန်ရန်န.ဲ နောက်နောင်ထိုက.ဲသ.ို မပြုလုပ် ရန်ဟူ၍ တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
နယူးယောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှ မြန်မာပြည်သူများနှင့် အတူ ကျနော်တို့ ရပ်တည်ကြောင်း၊ အားပေးကြောင်း၊ ထောက်ခံကြောင်း ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။